बिजखबर संवाददाता २०७६ मंसिर २१ (December 7, 2019) मा प्रकाशित
पछिल्लो समय नेपालमा अन्तरप्रदेशीय उडानको चर्चा भइरहेको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को पूर्वाधमा अहिले यो विषय किन पनि उठिरहेको छ भने अन्तरप्रदेशीय उडान हुन सके पर्यटकका लागि नेपालको यात्रा थप सहज हुने थियो र पर्यटक सबै प्रदेशमा पनि पुग्न सक्थे भन्ने हो जस्तो लाग्छ । अहिले माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले जुन ढंगले प्रदेशदेखि प्रदेश सम्म आन्तरिक उडान गर्ने कुरा अघि सार्नुभएको छ, त्यो सकारात्मक त छ । तर, त्यो तत्कालै सम्भव भने छैन । किन भन्ने प्रश्न पक्कै आउँछ यहाँ । यसको एउटै उत्तर भने बजारको अभाव नै हो । प्रदेशदेखि प्रदेशमा उडान गर्न मुख्य समस्या बजारकै हो । बजार हुने हो भने सबै एयरलाईन्स दौडेर भए पनि गईहाल्थे नि, हामी मात्र किन जान्थ्यौं र । हामीसँग पनि अन्तरप्रदेशीय उडानका लागि जहाज नभएको होईन पर्याप्तमात्रामा छ । तर के गर्ने मान्छे नै पाईँदैन, मान्छे पाउने हो भने उडान हुने हो, घाटाको ब्यापार त कसैले गर्दैन ।
तै पनि हामीले क्रस सेक्टरमा हेर्दा पोखरा–भैरहवा उडान गरेको ३ बर्ष भईसकेको छ । हामीले फेब्रुअरी ३ देखि पोखरा–बिराटनगर उडान गर्ने भनेर बुधबार मात्रै हप्तामा ३ उडान गर्ने गरी मिति तय गरेका छौं । त्यता दुई महिना उडान गरेर हेर्छौ, मान्छे भयो भने उडान थप गर्दै जाने हो । यदि त्यो सफल भयो भने एक दुई महिनाको फरकमा नेपालगञ्ज–पोखरा, पोखरा–सिमरा उडान गर्ने योजजामा पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । ‘हामीले गर्न सक्ने भनेको यतिमात्रै हो, अरुतिर अहिले तत्कालै सञ्चालन गर्न सम्भव छ जस्तो पनि लाग्दैन र हामी जान पनि सक्दैनौं ।
त्यस्तै अहिले धेरै समस्या बिमानस्थलमा पनि छ । काठमाडौं विमानस्थलमा ३ देखि ४ घण्टासम्म जहाज होल्ड भएर बस्नु पर्ने अवस्था छ । विमानस्थलमा सुधार हुँदा गरेर केही राम्रो होला, सफा होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, रनवे त एउटै छ । रनवे एउटा हुने बित्तिकै समस्या आइहाल्छ । यात्रु सुविधाका लागि टर्मिनल बनाउने होला, त्यो अलग पाटो हो । जसले गर्दा यात्रुलाई सहज होला । तर, रनवेको कुरा गर्ने हो भने त एउटा मात्रै हो, जहाज गुड्ने ठाउँनै नभए पछि अहिले जहाज थप्नुको पनि कुनै अर्थ छैन ।
अहिले पनि काठमाडौंको विमानस्थलमा आईकाओको क्यापासिटिबाट २५ प्रतिशत माथि उडान हुँदै आएको छ । अहिले ठाउँ नै छैन, जहाज मात्रै थपेर के गर्नु ? जति जहाज थप्दै गयो त्यतिनै होल्ड हुँदै जाने हो । आखिर गर्ने उडान भनेको त्यही पुरानै सेडुअल अनुसार हो । अहिले मुस्किलले ४ ओटा उडान गर्न समेत गाह्रो भईरहेको छ । जवसम्म पूर्वधार विकास हुँदैन तवसम्म जहाज थपेर केही हुँदैन । सन् २०२० भित्रै भैरहवा विमानस्थल संचालनमा आउने भनेको पनि कुरा मात्रै हो । तपाईहरुले बाहिरबाट हेर्दा त्यो देखिन्छ तर हामीले भित्र एनालाईसिस गर्दा त्यो अवस्था छैन । रनवे, विमानस्थल बनाउँदै गईरहेको छ, रुट कुन हो भन्ने कुरामै प्रश्न छ । रुट कुन हो भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन् ।
अहिले सम्म भारतले हवाई रुट समेत नदिएको अवस्था छ । भारतले जनकपुरको हवाई रुट उपलब्ध गराएर भैरहवाको लागि उपयुक्त नहुने देखिन्छ भैरहवाबाट दिल्ली जान सजिलो छ तर, आउने बाटो छैन । आउनको लागि फेरि सिमरा, विराटनगरको रुट हुँदै आउनुपर्छ । भारतले रुट दिन्छु भनेको होला, देला, कुरा भईरहेको होला, तर अहिल सम्म भारतले हवाई रुट उपलब्ध गराएको छैन । यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ ।
पर्यटन र पूर्वाधार
अहिले भ्रमण वर्षको चर्चा छ । तर, हामीले भ्रमण वर्षकै लागि भनेर त्यस्तो योजना पनि बनाउनुपर्ने देखेका छैनौं । भ्रमण बर्ष लक्षित जहाज थप्ने कि भन्ने अवस्था पनि देखिएन । आन्तरिक उडानको लागि मात्रै जहाज थपेर के गर्ने ? भ्रमण बर्ष भनेर पर्यटक आउन नै कुनै टुङ्गो छैन । सरकारको लक्ष्य जुन छ २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने, त्यो पनि सम्भव देखिएन । यस्तो अवस्थामा जहाज थपेर के गर्ने ? भ्रमण बर्षमा २० लाख पर्यटक ल्याउन सरकारले अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्नुपर्छ । जवसम्म अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्न सकिँदैन तव सम्म २० लाख पर्यटक ल्याउन सकिँदैन । भ्रमण बर्षमा केही पर्यटक त बढ्लान तर, २० लाख पर्यटक ल्याउन त अहिलेको तुलनामा दोब्बर बढ्नु पर्छ । त्यो कुनै हालतमा सम्भव छैन । अहिले नेपाल पर्यटन बोर्डले दिएको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल आउने पर्यटक भनेको ११ लाख हो । त्यसमा नेपाली पासपोर्ट होल्डरबाहेक ८ लाख हो । अब त्यो ८ लाखको डबलभन्दा माथी ग्रोथ हुनलाई त अन्तरराष्ट्रिय उडान पनि बढ्नु पर्यो । हेर्ने हो भने वायुयानहरु बढेको छैन, घटेको छ । जेट एयर बन्द भयो, त्यसको मार्केट कसले मेकअप गर्ने ? त्यसको स्थानमा को आउँछ भन्ने निश्चित छैन् ।
अर्कोतर्फ भ्रमण वर्षमा पोखरा, भैरहवा विमानस्थल संचालनमा आयो भने त्यो अलग कुरा हो । तर, काठमाडौंको विमानस्थलले धान्न सक्ने देखिँदैन । काठमाडौं विमानस्थलको त अहिले नै पनि कुनै स्लट खाली छैन । कसरी आउँछन त २० लाख पर्यटक ? त्यस्तै पर्यटक १० लाख नै होस तर क्वालिटिको आउनु पर्यो । २० लाख पर्यटक ल्याएर मात्र के गर्ने ? खर्च गर्ने पर्यटक बढाउनु पर्छ । चिनियाँ पर्यटक बढाएर पनि काम छैन । जसले खर्च गर्दैन त्यस्तो पर्यटक ल्याएर काम छैन । र अर्को कुरा २० लाख पर्यटक ल्याउँछु भनेर मात्रै हुँदैन, सरकारले पूर्वधारमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
सरकारले २० लाख पर्यटक ल्याउने होईन पर्यटक त नीजि क्षेत्रले ल्याउने हो । सरकारको काम भनेको पूर्वाधार बनाउने हो । तर, हाम्रो सरकारले त्यो काम गर्न सकेको छैन । पर्यटक जाने भनेको मूख्य रुपमा काठमाडौं पछि पोखरा, चितवन, नगरकोटलगायतका क्षेत्रमा हो । ति क्षेत्रसम्म जाने बाटोमात्रै बनाईदिए पनि पर्यटक बढने थिए । काठमाडौंदेखि नगरकोट २२–२५ किलोमिटर सडक बनाउन त सकिँदैन भने अरु के गर्न सकिन्छ, २० लाख पर्यटक ल्याउँछु भनेर मात्रै हुन्छ र ? भ्रमण बर्ष जस्ता अभियान सञ्चालन गर्नु राम्रो हो । नेपालको ब्राण्ड चिनाउने अवसर पनि हो । पर्यटक आउने–नआउने कुरा अलग पाटो हो । जवसम्म सरकारले पूर्वधारमा जोड दिँदैन, तबसम्म केही हुनेवाला छैन । पर्यटक बढाउन बाटो राम्रो हुनु पर्छ । मान्छेहरु इण्डोनेसियाको बाली किन जान्छन ? एक पटक गएको मान्छे आएर भन्छ ओहो राम्रो रहेछ भने पछि अरु पनि जाने हो । तर, हाम्रोमा त्यस्तो किन हुन सम्भव भइरहेको छैन भनेर बुझ्नुपर्छ ।
एक पटक आएको पर्यटकले दोस्रो पटक आउने गरि खुशी भएर जाने बतावरण बनाउनु पर्छ । त्यसको लागि हरेक क्षेत्रको पूर्वधार विकास गर्नुपर्छ । पूर्वाधारमा विकास गर्न सकेको खण्डमा एकपटक आउने पर्यटकले ओहो नेपाल राम्रो भईसकेको रहेछ भने पछि अरु पनि आउँछन । त्यसपछि २० लाख होईन त्यो भन्दा बढी पर्यटक ल्याउन सक्छौं । हामी जति प्रचार प्रसार गर्छौं त्यो गर्नु पर्छ तर थाईल्याण्डले नेपालमा आएर प्रचार प्रसार गरेको छैन त्यै पनि थाईल्याण्ड घुम्न जाने पर्यटक हरेक बर्ष बढीरहेका छन । यसपालि दशैंमा मात्रै १० हजार भन्दा बढी नेपाली बिदेश घुम्न गएका छन । एउटा गएर आए पछि उसले भन्छ–यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ भनेर । अनि अरु लहैलहैमा जाने गर्छन । तर, जानको लागि हरेक चिज राम्रो हुनु पर्छ र हाम्रोमा पनि त्यो हुनु पर्छ । राङडोल लामासँगको कुराकानीमा आधारित
आज बिदेशबाट नेपाली उद्वार उडानको अन्तिम दिन, विभिन्न देशमा ७ उडान हुने
एयर एशियाको भविष्य ‘संकट’ मा, नेपालले उठाउनुपर्ने करोडौं पनि डुब्ने निश्चित
नेपाल एयरलाइन्सका १४ उडान कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण, संक्रमित हुनेमा ३ पाइलट पनि
विभिन्न मुलुकबाट नेपालीको उद्धारका लागि आज ११ अन्तर्राष्ट्रिय उडान, बिहानैदेखि रातिसम्म बिमानस्थल व्यस्त रहने
नेपाल वायुसेवा निगम ६३ औं वर्षमा, लकडाउनका कारण एक अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गुमेको गुनासो
कोरोना महामारीको बेला हवाई यात्रा गर्नु कत्तिको जोखिमपूर्ण छ ? यस्तो छ निष्कर्ष
हिमालय एअरलाइन्स र हुवावे क्लाउडबीच रणनीतिक सम्झौता, यात्रुहरुलाई उत्कृष्ट टिकेटिङ विकल्प र यात्रा अनुभव प्रदान गर्ने